နေ့စဉ်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားပြောလေ့လာရအောင် (အပိုင်း ၁၁) - Myanmar Network
Posted by Language Republic on October 30, 2014 at 13:53 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
Bruce : Where did John go?
Laura : He went to the drugstore.
Bruce : To the bookstore?
Laura : No, I said he went to the drugstore.
Bruce : Oh, I misunderstood you. I thought you said bookstore.
Laura : How could you makeamistake like that? Weren't you paying attention?
Bruce နဲ့ Laura တို့ စကားပြောတဲ့ အကြောင်းကို စိတ်နဲ့ နားထောင် ကြည့်ရအောင်။
Bruce က "Where did John go?" လို့မေးလိုက်တယ်။ Laura က "He went to the drugstore." လို့ဖြေတာကို Bruce က bookstore လို့ကြားလိုက်တယ်။
Drugstore နှင့် Bookstore
ဒီ noun နှစ်ခုစလုံးဟာ compound nouns တွေဖြစ်တယ်။ စာလုံးပေါင်းရင် တွဲပေါင်းရတယ်။ ခွဲမပေါင်းရဘူး။ အသံထွက်တဲ့အခါ primary stress က ပဌမ အသံ first syllable တွေဖြစ်တဲ့ drug တို့ book တို့အပေါ်မှာထည့်ရတယ်။
To the bookstore?
Bruce က "To the bookstore?" လို့ ထပ်မေးလိုက်တယ်။ ဒီလိုမေးရာမှာ "Did you say he went to the bookstore?" ကို အတိုခြုံ့ ပြီး "To the bookstore?" လို့ပြောတာ ဖြစ်တယ်။ စကားပြောမှာ ပြောပြီးသားတွေကို ပြန် repeat လုပ်ရင် အကုန်လုံးပြန်မပြောရဘူး။ သဘာဝမကျလို့ပါ။ ဖြုတ်ပြောတဲ့ဟာ understood ဖြစ်ပါတယ်။
Bruce က bookstore လို့အကြားမှားလို့ Laura ကပြန်ဖြေတဲ့အခါမှာ drug အပေါ် stress ခပ်ပြင်းပြင်း ထည့်ပြီး "I said he went to the drugstore." လို့ intonation မြှင့်ပြောတယ်။ Bookstore မဟုတ်ဘူးဆိုတာ empahsize လုပ်ချင်လို့ပေါ့။
ခံစားချက်အဆိုးအကောင်း (Positive Emotions)
Permalink Reply by thinkhaingsoe on November 4, 2014 at 14:51
Permalink Reply by Aung Win Naing on December 9, 2014 at 16:58